Lacagta Lacagta Lacagta La'aanta ah ee Habraaca Sharciga ah ee ku saabsan Sida Looga Yeelo RDN / Trojan.worm
Haddii aad tahay isticmaale ah Windows 10, markaa waxaad halis ugu jiri kartaa infakshan ka yimaada qalabka waxyeelladaloo yaqaan RDN / Trojan.worm. Ogaanshaha habka saxda ah ee lagu aqoonsan karo lagana saarayo fayraskan aad ayuu muhiim u yahay, maxaa yeelay qaar ka mid ah nacaamiyeyaasha ayaa isku dayi doona inay saxaanwaxaad rumaysan tahay in aad qaadid cudurka si aad u bixinayso lacag si aad "u tirtirto". Dhab ahaantii, waxay qaadan doonaan lacagta oo ay sameeyaangabi ahaanba maaha, sababtoo ah maahan inaadan ku qaadsiin meesha ugu horeysa. Xeerka wanaagsan in laga fogaado xaaladahan waa inaad ku kalsoonaato oo keliyafarriimaha aad ka heshay software antivirus gaar ah. Fariimo kasta oo kale ayaa laga yaabaa in ay sababaan fiilooyinka iyo kordhinta ee shabakada internetka isticmaala.Haddii ay kuwani ku saabsanyihiin, markaa waa inaad isku daydaa inaad bedesho biraawsarkaaga si aad uga saarto waxyaabahan aan loo baahnayn.
Ivan Konovalov, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare Adeegyada Dijital ah, waxay bixisaa dhammaan wixii aad u baahan tahay inaad ogaato inaad ka fogaato cudurka RDN / Trojan.worm.
RDN / Trojan.worm waa mid ka mid ah fayrasyada ugu khatarsan kombiyuutarka adduunka, sidaas darteed haddiiwaxaad ka shakisan tahay in kombuyuutarku ku dhici karo infekshan, markaa waa inaad si taxadar leh u qaadatid. Waa Trojan, taasoo micnaheedu yahay in uu kuugu socdo kumbuyuutarkaaga la'aantiisadiga oo ogaanaya, kadibna waxay weeraraan xajis si aanad u aragto in waxyeellada ay sameyneyso.
Fayraskan waxa uu ku shaqeeyaa feylasha nidaamka nidaamka kombiyuutarkaaga. Si looga fogaadoogaanshaha, waxa ugu horreeya ee fayraskan waa inuu joojiyo software antivirus. Marka tani ay naafo tahay, waxay bilaabeysaa inay tirtirto muhiimfaylasha nidaamka, taasoo micnaheedu yahay kombuyuutarku uu shil.Waxaa intaa dheer, fayrasku wuxuu kaloo weerari karaa faylkaaga shakhsi ahaaneed, sidaas darteed haddii aadan haysanwaxay taageereen faylashaada muhiimka ah, ka dibna way lumin karaan weligood. Dhibaatadu waa in sida kaliya ee si joogto ah looga saaro fayraskasi aad u tirtirto faylasha cudurka qaba, si loo badbaadiyo kombiyuutarka waxaad ubaahantahay inaad lumiso qaar ama dhamaan faylashaada shakhsi ahaaneed. Dadka isticmaalakuwaas oo la kulmay fayruskan ayaa soo sheegay in ciddaas khatarta ah ay sidoo kale saameyn karto daalacashada webka, taas oo keenaysa inay qaboojiso. Dib u soo celintaadaPC ma isticmaali doono wax ka qabashada dhibaatooyinkaa browser-yada, maadaama ay wali halkaa joogi doonaan marka uu mar kale bilaabayo PC. Haddii aad u baahatidxir xiraha barafaysan, ka dibna waa inaad sidaas ku sameysaa maamulaha hawsha (oo laga helayo ctrl + alt + tirtir).
Ogaanshaha farqiga u dhexeeya aar-gudasho iyo nacasnimo dhab ah
U sheegista farqiga u dhaxeeya calaamad isku dayi doonta inaad ku qanciso adigakombiyuutarku waa infekshan iyo fayras dhab ah waa inuu ahaado mid sahlan. Digniinta been-abuurka ah ayaa furan markaad isticmaalayso barta internetka oo aad u badan tahayha qaadin magaca barnaamijka anti-virus-kaaga. Dadkan been abuurka ah waxay la xiriiri doonaan boggaga xaasidnimo ama fiilo aan loo baahneyn.Browserkaaga wax awood ah ma laheyn in aad scan aad computer, sidaas darteed haddii fariin this ku xiran yahay biraawsarkaaga, markaa waa in aad isla markiiba iska indha tiri.Waxay raadinayaan inay ku cabsi geliyaan inaad rumaysato in PC-gaaga uu halis ku jiro, ka dibna waxay isku dayaan inay kuugu qanciyaan inaad qayb kaashato si ay u xaliyaandhibaatada aan jirin. Waxaa laga yaabaa in ay ku hayaan faahfaahinta xiriirka (sida lambarka telefoonka) si aad ula xiriirto "xirfadlayaal" kuwaas oo "caawin kara".Dadka aad la hadli doonto haddii aad la xiriirto iyaga ayaa had iyo jeer noqon doona niyad-jebiye kuwaas oo isku dayaya inuu lacag kaa qaato. Tani waxay ku dhici kartaa shabakad kastaBrowser, had iyo jeer feejignaan markaad websaydhka internetka ka hesho haddii aad hesho fariin sidan oo kale ah.
Haddii aad digniin ka hesho barnaamijka dhabta ah ee antivirus sida Norton ama McAfee(ama calaamad la mid ah tan la yaqaan), ka dibna tan waa in la qaadaa si dhab ah. Waa in aad raacdid digniinahan adigoo isticmaalaya tarjumadda kombiyuutarka adoo isticmaalayasoftware anti-bini-aadamka. Haddii kombiyuutarku ku xiran yahay internetka, markaa khatar ayay ka imanaysaa khayaanada, ka qaado digniinaha antivirus dhabta ahsoftware si dhab ah. Kaliya feejignaan ka soo horjeeda cilaaqaadka.
Ka saarista RDN / Trojan.worm
Haddii aad haysatid sabab wanaagsan oo aad rumaysan tahay in PC-gaaga uu ku dhici karo infekshanka, markaa adigawaa inay isticmaashaa qalab xirfad leh oo looga saaro Malware. Xitaa haddii "naceybka" uu soo baxo inuu yahay been abuur, had iyo goor way ka wanaagsan tahay in laga badbadalaado marka laga xumaado.Fadlan raac tilmaamahan si aad uga saarto RDN / Trojan.worm (ama khayaano kale):
Isticmaalidda kombiyuutarka aan cudurka qabin, soo qaado faylka loo yaqaan 'SpyHunter file file'
Ku wareeji feylka kombiyuutarka cudurka qaba oo kashifi. Xaqiiqda ayaa soo baxaysa,oo kaliya ku dhuftay badhanka RUN marka ay qabato..
Sameeya luqadda aad jeclaan lahayd. Riix OK.
riix I ACCEPT. Saxiix SOMALI
Sug inta uu SpyHunter ku xiran yahay.
Marka rakibidda ay dhammaato, riix EXIT.
Dib u kobcin kombiyuutarkaada Habka Amaanka leh. Marka miisaska ay ku jiraan, isticmaalSoftware SpyHunter. Riix badhanka SCAN COMPUTER Hada hadda si aad u oggolaato barnaamijka inuu sameeyo baaritaanka nidaamka oo idil.
Sug inta uu SpyHunter sameynayo sawirkaan.
Ka dib marka la baarayo, barnaamijka ayaa liiska ku qori doona dhammaan khatarta lagu ogaado PC-gaaga.Isticmaal badhanka lagu calaamadeeyay FIXIDA WAXAYSIGA si aad u nadiifiso kombiyuutarkaaga.
Marka hanjabaadaha laga saaro, dib u fur PC-gaaga. Haddii dhibaatadu sii socotomarkaad dib u soo cusbooneysiiso kombuyutarkaaga, raadso caawimo koox ka mid ah taageerada xirfadleyda.
Malware (iyo xaasidnimo) "nacayb") waa halis guud oo ka mid ah dadka isticmaala PC-ga. Markaad haysatocudurku ku dhacay, waxa ugu muhiimsan waa in isla markiiba wax laga qabto. Inta aad sugayso, dhaawaca badan ee uu sameyn karo. Mar walba hubsosi aad u sameyso koobiyada dukumintiyada muhiimka ah, sababtoo ah ma ogid waxa ay Malware ku burburin doonaan.
Haddii uu Fayrasku yahay mid dhab ah, ama kaliya khiyaamo, qalabka xirfadlayaasha ah ee khatarta ah ee khatarta ah waahab wax ku ool ah oo wax ka qabashada dhibaatooyinka aad qabto. U dhaqso sida ugu dhakhsaha badan si aad u ilaaliso PC-gaaga iyo xogtaada Source .